Shilalekha » शेयरबजारको दोस्रो बजारमा सक्रिय लगानीकर्ता साढे पाँच लाख नाघ्यो, अनलाईन प्रयोगकर्ता कति ? शेयरबजारको दोस्रो बजारमा सक्रिय लगानीकर्ता साढे पाँच लाख नाघ्यो, अनलाईन प्रयोगकर्ता कति ? – Shilalekha
शेयरबजारको दोस्रो बजारमा सक्रिय लगानीकर्ता साढे पाँच लाख नाघ्यो, अनलाईन प्रयोगकर्ता कति ?
काठमाडौं । दोस्रो बजारमा कारोबार गर्ने सक्रिय लगानीकर्ताहरुको संख्या साढे ५ लाख नाघेको छ। नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) ले सार्वजनिक गरेको तथ्यांक अनुसार फागुन ९ गतेसम्ममा सक्रिय लगानीकर्ताहरुको संख्या ५ लाख ५० हजार ४०९ पुगेका हुन्।